पतिको मृ’त्यु भयो, सर्प चितामा ,स’तीमा सं’लग्न??? – Online Nepalaja
January 30, 2021 277
एक समय, जब पतिको मृ’त्यु भयो, श्रीमती पनि चि’तामा स’तीमा सं’लग्न भइन्। यस किसिमका कथाहरू कहिलेकाहिँ आज पनि सुन्न सकिन्छ। तर हालसालै मध्य प्रदेशको मु’रैनामा स’तीको कथा अगाडि आएको छ जुन सुन्न तपाईं छ’क्क पर्नुहुनेछ। अवस्था यो हो कि २०-२२ दिन अघि मु’रैनामा स’र्पको मृ’त्यु भएपछि उनको अ’न्त्येष्टि चि’त्तामा आफै पनि स’ती भयो।स्था’नीय व्य’क्तिका अनुसार २०-२२ दिन अघि स’र्पको मृ’त्यु भएको थियो। उसको मृ’त्युको का’रण दु:खी, सर्प कुनै चीज नखाई नागको श’व नजिकै ब’स्यो। अन्तमा एक दिन गा’उँलेहरूले ना’गको दा’हसंस्कार गरे, तर सर्पले पनि चि’त्तामा जीवन दिं’दा ति’नीहरू छ’क्क परे।
मुरै’नाकी क’मला बाईले भने कि सर्पको ला’श चि’त्तामा ज’लाइएको थियो, सर्प पनि त्यहाँ आयो र चि’त्तामा घु’म्न था’ल्यो र अचा’नक हाम हालेर आफ्नो ज्या’न दियो। यस पछि, गाउँका म’हिलाहरूले स’र्पलाई सु’न्दर म’हिलाको रू’पमा स’जाए र उनको शरीर नागको अ’न्त्येष्टि गर्न चि’त्तामा राखिन्।भनिन्छ कि गा’उँलेहरूले यस सर्प दम्प’तीको ख’रानी गं’गा जी’सम्म पु’र्‍याए र प्र’स्ताव गरिएको पै’साले भ’ण्डारको आ’योजन गरे। समाचार यो पनि हो कि पछि उनकी स्मृ’तिमा चि’तुवा सा’इटमा एक प्ले’टफर्म खडा गरिनेछ।
वा’स्तवमा, खे’रियाको मै’दानमा काम गरिरहेका एक जना यु’वकले एक दिन साँ’पको जो’डी देखे। अरूको इ’शारामा त्यो युवकले दुबै सर्पलाई ला’ठीले कु’टे र तिनीहरूलाई उठाएर फ्याँ’किदिए। भो’लिपल्ट त्यो जवान मानिसलाई स’र्पले भे’ट्टायो र स’र्पलाई त्यहीं टोक्यो तर सर्प जी’वित छ र ऊ मरेको स’र्पको नजिक ब’सिरहेको छ।यदि सर्प घ’ण्टासम्म बसेको थियो भने, त्यो जवान मानिस गा’उँलेहरूलाई भन्यो। कुरा सुरू हुने बि’त्तिकै यस स’र्पको जो’डी हेर्न मा’न्छेहरू आ-आफ्ना ठाउँ जान थाले। उसले हो’सियारीसाथ दुबै स’र्पहरू लिएर रू’खमुनि रा’ख्यो र ति’नीहरूको पूजा गर्न सुरु गर्यो र पैसा दिन शुरू गर्यो।मानिसहरूले नागको ला’सको छेउमा बसेको स’र्पलाई भने। केही गाउँलेहरू वि’श्वास गर्छन् कि यी स’र्प-स’र्पले अघिल्लो जन्मको पति र प’त्नी हुनेछन, त्यसैले स’र्पले नाग छा’ड्दै थिएन।
Prevआखिर किन गाईको पेटमा प्वाल पार्छन् अमेरिकी किसान ? कारण थाहा पाउनु भयो भने तपाइँ पनि चकित पर्नु हुन्छ !
Nextलौ.अच्म !!!एकसाथ ७, प्रेमिकालाई गर्भवती बनाए यी युवकले